-နိုင်ငံတကာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို တရားစွဲဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး… – PVTV Myanmar
·9months ago ·27 Comments
-နိုင်ငံတကာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို တရားစွဲဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြင်ဆင်နေ
-စစ်ကောင်စီပြန်ကြာရေး အေးသဇင်မြင့်ကို ဗိုလ်တထောင်ကောလိပ် Journalism ကျောင်းဆင်းများ က သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ် သတ်မှတ်
-အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို သတင်းပေးဒလန်လုပ်သူများ ဓါးခုတ်ခံရပြီး၂ ဦးသေ ၇ ဦးဒဏ်ရာရ
-မေ ၁ ရက်နေ့ အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲမှာ အမြင့်ဆုံးဆု‌ငွေ ကျပ်သိန်းတစ်‌သောင်းခွဲ မပေးနိုင်တော့ဟု စစ်ကောင်စီ ထုတ်ပြန်
-စစ်ကားနဲ့ ရဲကား အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး စစ်ကား တိမ်းမှောက် စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 7.3K Share – 986
ဂျပန်အစိုးရက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီတွေ အမြန်ဆုံးပေးနိုင်ဖို့ Burma Japan Relief Center ကိုယ်စားလှယ် Keiko Nakao က မျှော်လင့်
Salai Kyaw Naing Tun says:
Zaw Ko says:
2021-04-30 at 8:28 PM
Kyaw Soe Min says:
Cho Cho Khaing says:
2021-04-30 at 8:29 PM
Zawmine Zawmine says:
2021-04-30 at 8:31 PM
2021-04-30 at 8:34 PM
ဇော်မဲလုံးက​သေသွားတာလား ဟင် သေချာနေpလား
Ngwa Ma Lay says:
2021-04-30 at 8:43 PM
ေစာ မင္း ထြန္း says:
2021-04-30 at 8:47 PM
Luu Bhone says:
2021-04-30 at 8:51 PM
2021-04-30 at 8:54 PM
မသာကောင်တွေ ဆီ ကို ဘာဝင်ငွေ မှ မရအောင် လုပ်ပေးပါ။ ကူညီကြပါ။
Soe Than says:
I don’t understand why US sanction doesn’t include MOGE. Asking US government to extend the sanctions to MOGE might be easier and get faster impact than sueing those companies.
Kyaw Ko says:
2021-04-30 at 8:56 PM
ပေ တံ says:
2021-04-30 at 9:03 PM
2021-04-30 at 9:04 PM
Zaw Min Naing says:
2021-04-30 at 9:13 PM
ႀကိဳဆိုပါတယ္ NUG 👏👏👏
2021-04-30 at 9:32 PM
ခွေးမျိုးတွေးနဲအမျိုးရုပ် အမျိုးညံရွာအပြင်ထုပ်ပြစ် အများပြည်သူကစကားပြောကျပါဲနဲချေးထုပ်မအမျိုးမစစ်ဘူး
ထီမ ထိုးဘူးနော် အများပြည်သူပြည်သားများကျေးဇုးပြု၍အသိပါရစေနော် ညီတယ်နော်ဒိုပြည်တွေ ထီမထိုကျပ့ါနဲ
ေမာင္ ေဇာ္ says:
2021-04-30 at 9:42 PM
Nan Shwedalay says:
2021-04-30 at 10:11 PM
2021-04-30 at 11:17 PM
2021-05-01 at 12:38 AM
ထိုင်း အာဏာရှင်တပိုင်း PTTEP လည်း ပိတ်ဆို့အ‌ရေးယူ တရာစွဲဆိုမှုထဲမပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သမျှ အကုန် ရွှေကမ်းလွန်ကလွဲလို့ကျန်တာတွေက ထိုင်းဖက်ကိုရောင်းနေရတာပါ။
Soe Htwe says:
2021-05-01 at 1:55 AM
2021-05-01 at 7:03 AM
2021-05-01 at 8:43 PM